IINDIDI ZEMIGANGATHO YEHARDWOOD (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iindidi zeMigangatho yeHardwood (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sakho sokugqibela kwezona ntlobo zidumileyo zomgangatho okhuni. Apha siza kuphendula uninzi lwemibuzo onokuba nayo ngaphambi kokuthenga kunye / okanye ukufaka umgangatho wokhuni oluqinileyo! Ngelixa iindlela zoyilo lwangaphakathi zifikile kwaye zihambile, ukufaka i-hardwood flooring entle akukaze kuphume ngesitayile. Umgangatho wokhuni oluqinileyo unolu hlobo olufudumeleyo lwendalo abaninikhaya abaluthandayo. Iyaqhubeka ukuhlala ithandwa kuyo yonke iminyaka kwinxalenye enkulu ngenxa yobuninzi beepateni zokutya, imibala kunye nezinto ezikhoyo ezikhoyo.
Imigangatho yeenkuni kulula ukuyicoca, yomelele kwaye ifunwa kakhulu ngabathengi abanokubenza babe notyalo-mali olukhulu. Xa ufuna indlu entsha, okanye undwendwela indlu ethile, olona phawu lukhulu lwendlu olwenzayo ngumgangatho. Yile nto iinyawo zakho ziyichukumisayo. Ikwakhupha umbala weendonga, ifenitshala, kunye nesishwankathelo semvakalelo yendlu iphela.
Kukho iindidi ezahlukeneyo zemigangatho enokusetyenziswa ezindlwini. Elinye nelinye liba neenzuzo kunye neengxaki kunye nokukhethwa ngokwenene kuxhomekeke kumninikhaya. Ezona ntlobo zixhaphakileyo zemigangatho ngumthi onzima, i-laminate, iithayile, ilitye kunye nekhaphethi. Imigangatho yehardwood ihlala iyeyona iphambili kwimigangatho ngenxa yokwahluka kwayo, ukugcinwa okuphantsi, ukuhlala ixesha elide kunye nobuhle.
Apha ngezantsi sigubungela ezinye zeentlobo ezilungileyo zemigangatho elukhuni kubandakanya iinkcukacha malunga namabanga, ukusika, ukugqiba kunye nokunye ukukunceda kwiprojekthi yakho yokulungisa kwakhona.
Umgangatho oqinileyo weHoldwood
Izitayile zomthi okhuni
Ubunjineli boMgangatho oLukhuni
Umgangatho oqinileyo woMgangatho weenkuni
I-acrylic efakwe kwi-Wood Flooring
Iindidi zeentlobo zeenkuni
Iindleko zomgangatho okhuni
Isikhokelo seXabiso loMgangatho weHardwood
Iindleko zokuCoca uMgangatho oLukhuni
I-Hardwood Flooring Ukuthenga iinketho zokuhlobisa
Ubungakanani bokhuni oluqinileyo
Umgangatho wolukhuni amaBakala
Inani 1 eliqhelekileyo
Inani 2 eliqhelekileyo
Ukunqunyulwa komthi okhuni
Umbala woMthi okhuni
Umgangatho ogqityiweyo womthi okhuni
Isandla esikhuhliweyo somthi oLukhuni
Yintoni i-Hand Scraped Hardwood?
Unxunguphele Gqiba uMgangatho woMthi
Umphezulu wokhuni oluqinileyo ugqityiwe
Amanzi asekwe eUrethane
I-Urethane esekwe kwioyile
Ukunyanga okuphilileyo Urethane
Ubunzima be-Wax yeoyile
Gqiba iiSheens (Gloss High, Gloss Low & Satin)
Iindidi zenkcukacha zomgangatho
Ukufakwa komgangatho wokhuni oluqinileyo
Umgangatho wokhuni oluLala ngaphantsi kwaMatye / i-Insulation
Ulondolozo lomgangatho okhuni
Enye yezona mpawu zibalaseleyo zokufumana ukuqiniswa komthi onzima okomeleleyo kukuba inokucokiswa amaxesha ngamaxesha, oku kudala ubomi obude kakhulu. Inkangeleko yayo yendalo yinto engaphelelwa lixesha, ke ubomi obude kubaluleke kakhulu.
Kukho izinto onokuzigcina engqondweni malunga nemveliso xa uthatha isigqibo ngeyona ndawo ilungileyo yokusebenzisa i-hardwood flooring eqinileyo.
Umthi onzima oqinileyo awukhuthazwa ngokuqhelekileyo Umgangatho ongaphantsi okanye nayiphi na indawo engezantsi kwebanga. Kungenxa yokuba iibhodi zibethelelwe kumgangatho ongaphantsi, ke ngoko azilungelanga ikhonkrithi, kwaye nangaphantsi kwezithuba zebakala ziye zonyusa ukufuma kunye nokufuma kwaye zinokudala ukugoba, ukusika, okanye izikhewu emithini.
I-Warping kuxa iinkuni zingasasebenzi, ngenxa yoxinzelelo kunye nokuncipha, okubangelwa kukufuma. Ukucoca i-warp yintsimbi ebangela ukuba amacala omthi anyuke, oko kudala isiphumo. Izikhewu zingenziwa ngokuncipha kunye nokwanda kweenkuni ezibangela ukuba iziqwenga zihambe kwaye zenze izikhewu.
Xa ujonga iintlobo zemithi eqinileyo ekhayeni lakho kubalulekile ukuba ujonge ezona ntlobo zintathu zithandwayo: i-strip flooring, i-plank flooring, kunye neparquet flooring. Uhlobo ngalunye luneentlobo zalo, umbala, kunye nobukhulu ngoko ke kuninzi onokukhetha kuko.
Xa kuthelekiswa nomgangatho wokukroba, kukho iintliziyo ezininzi kule ndlela. Umgangatho weplangwe ubanzi ngee-intshi ezingama-20 ukuya kuma-30 ububanzi. Inika ukujonga okungaqhelekanga xa kuthelekiswa nomgangatho wokubonisa obonisa ukujonga okuthe kratya.
Umgangatho weplanethi ukutyibilika kufumaneke kubukhulu be-1/2 kunye ne-¾ ngelixa ububanzi bungaqala naphi na ukusuka ku-3 ukuya ku-8 kwiiplanga eziqhelekileyo.
Umgangatho weplanethi uthathelwa ingqalelo isitayile sendabuko somgangatho okhuni. Ukucaciswa, umthi osetyenziselwe le ndlela unqunyulwa ukusuka kwindawo enganqwenelekiyo yomthi. Umthi usikwa kubude obufutshane kunye nobubanzi obuncinci. Umgangatho we-Strip uqhelekile kwii-intshi ezintathu ububanzi.
Umgangatho weplastiki wahlulahlula ngobukhulu beebhodi, kwaye iya kuba nobubanzi obumiselweyo. Ezi zinokubakho kububanzi ukusukela ku-5 / 16th ye-intshi ukuya ku-¾, kodwa kuphela ububanzi obuzayo bufike ngo-1 ½, 2 no-2 ¼.
Umgangatho weParquet yimizobo yomthi edityaniswe ukwenza uyilo oluthile okanye iphethini. I-parquet flooring iyilo loyilo oluqhelekileyo oluvela kumthi oqhelekileyo okhuni. Olu hlobo lophahla lwenziwe kwiipateni zejiyometri ezigcinwe kunye zi-adhesives zangaphambili okanye ngoomatshini. Le yindlela eyahlukileyo kwaye yoyilo lokongeza umdla kumgangatho.
Eyona pateni ithandwayo ngumnqonqo. Nangona kunzima kwaye kuthatha ixesha elide ukufakela, le migangatho ihlala ixesha elide kwaye iphantsi. Nangona kunjalo, kukho iimeko apho iibhloksi zomthi ziye zakhutshwa kwaye zaphuma. Ezi ziqwenga zifuna nje ukuba zincanyathiselwe emgangathweni.
Umgangatho wokhuni olomeleleyo ngobunjineli lusisiseko seengqimba zeenkuni ezicinezelweyo kunye ukwenza iithayile zaphantsi. Kukho umaleko wokhuni oluqinileyo lokwenyani kumphezulu nakumgangatho osezantsi oya kuthi unike ukufana okuthe ngqo kwinto yokwenyani ngelixa unika ukumelana okungcono kufuma. Oku kuvumela imveliso ukuba ifakwe kufutshane nakuphi na ukuseta. Kumfanekiso ongentla ungabona ukuba intle kangakanani Umgangatho onzima wobunjineli ekhitshini jonga.
Umgangatho oqinileyo wokhuni olomeleleyo sisiqwenga esiqinileyo sodidi olunye lomthi ukusuka phezulu kuye ezantsi nasecaleni. Olu hlobo lophahla lutyebile ngokulinganayo ukuze lube nesanti kwaye luphuculwe kaninzi kwakhona. Ngenxa yobume bayo, ukhuni oluqinileyo luyanda kunye nezivumelwano ngokuxhomekeke kutshintsho kumanqanaba okufuma kunye neqondo lobushushu. Ezi ntlobo zephantsi ziyacetyiswa kumagumbi asezantsi okanye ngaphezulu. Akubobulumko ukusebenzisa umgangatho oqinileyo womthi kumagumbi angaphantsi nakwigumbi lokuhlambela. Zininzi iintlobo zeenkuni onokukhetha kuzo xa kuthelekiswa neenkuni. Le migangatho yomelele kakhulu kwaye kunzima ukuyenza ukuba ibe notyalo-mali olukhulu.
Imigangatho yobunjineli yenziwe ngomthi oqinileyo okanye iplywood ngamaplanga alukhuni. Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, imigangatho yobunjineli yenziwe ngomthi wokwenyani kwaye ayingqinanga. Olu hlobo lophahla kulula ukulufaka. Kukho ukhetho oluncinci ngokweentlobo zeenkuni, kodwa le migangatho isomelele kakhulu. Zingafakwa kwiindawo ezinokufuma okufana nezindlu zangaphantsi kodwa iingxaki kufuneka zijongwe kwizilumkiso ezifanelekileyo. Kuba imigangatho yobunjineli icekeceke ukuba yomelele, inokufakwa isanti kuphela kwaye iphinde icokiswe amaxesha ambalwa ngaphambi kokuba umaleko ongaphezulu onqabileyo uphele. Iyasebenza ngakumbi kunezinto eziqinileyo, kodwa ayizukuhlala ixesha elide.
Xa uqala ukukhangela okanye umgangatho oqinileyo womthi kukho ulwazi oluninzi ekufuneka ludlulisiwe. Indawo enkulu yokuthabatha kukuba i-hardwood flooring yibhodi yendalo, ngelixa i-hardwood yenziwa (njengoko igama lisitsho) yenzelwe ukuba ibukeke ngathi ngumthi onzima kunye nongqameko lwenkuni yokwenyani ngaphezulu, kodwa yongeze izicelo kwaye ibiza kancinci kuneenkuni eziqinileyo .
I-acrylic ekhulelweyo yomgangatho waphantsi ngumgangatho owahlukileyo one-sealant kunye nombala ofakwe ngaphakathi komthi. Oku kuqheleke kakhulu ukusetyenziselwa iiprojekthi zorhwebo ngenxa yokuxhathisa okugqithileyo kubumanzi kunye neirrasions.
Izazinzulu zibhale ngaphezulu kwe-60,000 yeentlobo zemithi emhlabeni. Ewe, ayisiyiyo yonke le mithi enokusetyenziswa njengemigangatho eqinileyo yomthi. Ezona ntlobo zisetyenziswayo zomthi ezisetyenziselwa imigangatho kuvavanywa umgangatho wazo kunye nokuphila kwazo ixesha elide.
Kuba umthi uza kwiintlobo ezininzi ezahlukeneyo zohlobo ngalunye luneenkangeleko ezahlukileyo, ukuziva kunye neempawu. Nokuba ukhangela umthi okhanyayo onje ngemephu, umbala ophakathi njenge-oki, okanye umbala omnyama womthi ofana nomdaka kukho iintlobo ezininzi onokukhetha kuzo. Uhlobo ngalunye lwokhuni lunempawu zendalo ezinceda ukubonisa uhlobo lwazo. Iimpawu eziqhelekileyo kukucheba, iipateni kunye nemingxunya yamaqhina enokunceda ekuchongeni uhlobo lomthi kunye nokuluhlula.
Nalu uluhlu lwethu lweentlobo ezaziwa kakhulu zemigangatho eqinileyo esetyenziselwa uyilo lwangaphakathi namhlanje:
Kukho iintlobo ezingaphezu kwama-600 ze-oki ezifumaneka kulo lonke elaseMelika, eYurophu, eAsia naseAfrika. Bathwala iziqhamo ezaziwa ngokuba ziiacorn ezigcina amandongomane ngaphakathi kwigobolondo elilukhuni. Amagqabi kunye namandongomane awo ane-tannic acid ebakhusela kwifungi nakwizinambuzane. Lo mgangatho ubenza babe zezona ntlobo zaziwayo zomthi ezisetyenziselwa ukwakha: imigangatho, imiqadi kunye nezakhelo. I-Oak ikwasetyenziselwa ukwenza ifanitshala, imiphanda yewayini, kunye nezixhobo zomculo.
Iinkuni ze-Oak zihlala zimdaka ngombala ngombala opinki okanye ongwevu. I-Oak ifumaneka ngokulula kunye nokhetho oludumileyo njengemigangatho eqinileyo yomthi. Ndwendwela eli phepha ukuze ubone eyethu i-oki yomthi okhuni igalari.
Umgangatho womthi we-oki ukude kwaye zezona ntlobo zidumileyo zomthi ezisetyenziselwa ukutyibilika kwiprojekthi yoyilo lwangaphakathi. Umgangatho we-Oak uyinyani yeklasi enezinto ezininzi eziluncedo. Um-oki uphakathi komthi othambileyo kwaye onzima. Ukulinganisa okuphakathi, ixabiso eliphakathi, i-oki ngumthi onexabiso elifanelekileyo kwiimpawu elinazo. Zimbini iintlobo eziphambili zomgangatho we-Oak oyi-oki emhlophe kunye ne-oki ebomvu. Nangona kunjalo, kubathandi be-oki abangaqhelekanga kukho ukungeniswa kwe-oki yaseYurophu.
I-White Oak ngumbala omdaka ngebala ngombala opinki okanye ongwevu, lo ngumbala odityaniswa ngokulula neziqwenga zefanitshala ngenxa yokubonakala kombala. Inqabile kune-oki ebomvu, egreyithiweyo ngokuthe gca kwaye ine-medium to course texture.
I-Oak ebomvu ikwangumthi okhanyayo kunye nombala obomvu ngokwesiko, ikwenza kube lula ukudibana nezinye izinto. Ngobulukhuni iintlobo ezibomvu zincinci nzima kancinci kunogxa wazo omhlophe.
I-Oak yaseYurophu ngokubanzi ingeniswa isuka eFrance okanye eJamani kwaye ineenkozo eziqinileyo kunezinye iintlobo ze-oki. Inkqubo yase-Europe yokusika i-oki yabo, ebizwa ngokuba yi-canting yenza iplanti ebanzi ngokubanzi enoluhlu lwe-7 ″ -10 ″.
I-walnut ngumthi omkhulu kwaye womelele ozalelwa kwi-Central Asia. Ngoku ikhuliswa ngokubanzi kuMntla Melika naseYurophu. Inkuni zayo zinzima, zinzima kwaye zivulekile. Imithi yeWalnut ithathwa njengendawo ephezulu, yiyo loo nto ihlala isetyenziselwa ii-guitars, ifanitshala kunye nemigangatho. Umbala wayo uyahluka ukusuka kumbala omdaka mnyama ukuya kumbala omnyama. Xa isetyenzisiwe phantsi, inika ubumnyama kunye nokuziva ucebile endlwini. Kuba olu luhlobo oluphezulu lomthi onzima, kuyabiza kakhulu kodwa kuhlala kubomi bonke.
Iinkonzo zomthi onzima we-walnut zininzi, ezenza ukhetho oluthandwayo lomgangatho. Nangona kukho iintlobo ezahlukeneyo zemithi ye-walnut, kwaye yaziwa ngombala wayo omdaka omdaka, phantse ngombala omfusa. I-Walnut iqulethe iinkozo ezimnyama, ezijikelezayo ezongeza kubuhle bemithi yendalo. Ndwendwela eli phepha legalari ngaphezulu Umthi womthi womthi izimvo.
I-Walnut nayo iyamelana nokukhanya. Oku kuthetha ukuba ngekhe ibenelanga okanye ibilelwe lilanga kwaye iyakusebenza kakuhle kwigumbi elinelanga elithe ngqo, ngokungafaniyo neminye imithi. I-Walnut ikwangumthi osindayo, oko kuthetha ukuba ukufakelwa kwinqanaba eliphezulu kuyalawuleka. Iinkuni zinobubi obuncinci nangona, ngenxa yazo zonke izinto ezilungileyo ngumthi obiza kakhulu. I-Walnut ayisiwo umthi oqinileyo, ngumthi onzima othambileyo, okuthetha ukuba ifanitshala enzima okanye ukugcwala kwabantu rhoqo kunokubangela ukonakala kunye nokunxiba.
darin imilambo imihla yobomi bethu
Imithi ye-Ash ikhula ngakuMntla Melika, eYurophu naseAsia. Zihlala ziphakathi ukuya kwimithi emikhulu ekhula kwimozulu eshushu. Iinkuni zabo ziyintandokazi phakathi kwabasebenzi beplanga kuba zinzima, zixinene, kwaye zomelele kakhulu kodwa ziseneka kakhulu. Ngenxa yezi mpawu, iinkuni zomlotha zenziwa izitya, izibambo kunye namalulwane e-baseball. Kwezorhwebo, iinkuni zikwasetyenziselwa izinyuko, iziginci eziphezulu, kunye nolwakhiwo lwezithuthi ezinje ngeemoto neenqwelo moya. Ihlala ikhanya ngombala omnyama ngombala.
Umthi womlotha unepateni eninzi kwiingqolowa zawo, kwaye mhle ngokukhanya ngombala, uhlala unombala omhlophe ngawo. Amanqanaba e-Ash kwindawo ethile embindini kwisikali sobunzima. Yomelele ngokwaneleyo ukuba isingathe izithuthi kodwa ayinzima njengeHickory kwaye inika imvakalelo efudumeleyo, ekhululekile. I-Ash ithatha ukubala kakuhle, ke kukho imibala eyahlukeneyo onokuyikhetha le mthi. Icala elisezantsi kukuba ngumthi okhanyayo kwaye uya kufuna ulondolozo kunye nokucoca rhoqo.
Iinkqubo ze-mahogany zibandakanya ubunzima bayo, iinkozo ezintle kunye nokwahluka kwemibala. I-Mahogany inzima, izinzile kwaye ihlala ixesha elide kunezo zombini iindidi ze-oki ezinobunzima be-Janka obungu-2200. IMahogany iza kuzo zonke iintlobo zemibala ukusuka kwiorenji ukuya kumbala omdaka ngombala rhoqo ngombala omdaka ophakathi ngeziqwenga.
Imibala okanye i-mahogany iba mnyama kwaye ityebile njengoko ixesha lihamba kwaye iinkuni zibonakalisiwe ekukhanyeni. Iinkozo ze-mahogany zezi ze-wavy ezinemigca IMahogany yinto ebizayo ngenxa yezi mpawu kwaye ifuna ukungeniswa elizweni.
Umthi we-hickory uneentlobo ezili-17 ukuya kwezi-19 ezisasazeke kwelaseAsia, eMntla Melika, eMexico naseKhanada. Iinkuni zeHickory zithandwa ngokuxhathisa, ukuqina, kunye nokuxinana. Kukho uluhlu olubanzi lokusetyenziswa kwezorhwebo ngomthi wehickory: izixhobo, izixhobo zomculo, kunye nezixhobo zemidlalo. Iinkuni zazo zihlala zomelele ekumelaneni nokunxiba kunye neempawu ezenza ukuba zikhethwe kakuhle emgangathweni. Zihlala zibomvu ngombala ngombala. IHickory inzima kuneenkuni zom-oki, kodwa azithandwa kukunganyangeki kwazo.
Ukuba iprojekti enkulu kaHickory igcinwe kakuhle kukuqina kwayo okukuko. Lo mthi unokuhlala ubomi bonke ukuba uyakhathalelwa. IHickory inenkozo ecace gca, ebabazekayo kwaye ibonwa ngokulula kumbala obomvu-bomdaka kunye naphakathi ngombala we-tan, ikwafumaneka ngamanye amaxesha ngombala omdaka kakhulu. Ikhonkco kule intle kakhulu kwaye inzima njengezikhonkwane zomgangatho kukuba isiphelo esinexabiso eliphantsi somgangatho, ngakumbi ngenxa yeendleko zokufaka.
Ngeentlobo ezingaphezu kwe-128 zomthi onzima we-maple, igqabi lawo laziwa ngokubanzi kwiflegi yaseCanada efuzisela amandla kunye nonyamezelo. Ubuninzi beentlobo zivela eAsia, kodwa iintlobo ezahlukeneyo zifumaneka kwiYurophu, enyakatho yeAfrika naseNyakatho Melika. Ngaphandle kweenkuni zayo, imithi yeemaple isetyenziswa ngokubanzi kwisiraphu yemephu evela kwincindi yawo.
Imithi yemaple isetyenziselwa ukwenza amalulwane e-baseball, iindlela ze-bowling alley, iibhloko ze-butcher, i-pool cue shafts kunye ne-archery bow. Ngorhwebo, iinkuni zemephu zisetyenziselwa imigangatho nefenitshala. Ihlala imhlophe bukhrim kumdaka okhanyayo umbala obomvu ngombala. Nangona imephu yayivela kuMazantsi mpuma eAsia, Imephu yomthi okhuni ifumaneka lula kwiivenkile ezininzi. Kukhetho olukhethiweyo ngenxa yenxalenye enkulu kubuhle bayo bendalo kunye nokuqina okuphezulu ngenqaku lobunzima beJanka le-1450 yeentlobo ezinzima kakhulu.
Iipros zeepleme zahluke njani kweminye imithi. Oku kungenxa yokutya okuziinkozo kwayo kunye nokufana kwayo. Lo ngumthi ombala okhanyayo ngokunjalo, zontathu izinto ezenza ukuba ibe lukhetho olunomtsalane kubathengi bomthi onzima.
Imephu ikwangumthi owomeleleyo onokukwazi ukuphatha ifanitshala enzima kwaye iyamelana nokukhuhla okanye ukukrwela. I-Maple nayo kulula ukuyichitha, kwaye ihlala ichaphazeleka ukujongeka njengezinye, imithi ebiza kakhulu. Eyona nto inokubakho kuphela xa inamabala kufuneka itywinwe ngokufanelekileyo ukuthintela ukubamba. Ixabiso kwimephu lifikeleleka kakhulu.
I-Birch ngumthi onzima onamagqabi amancinci ahambelana kakhulu nosapho lwe-beech-oki. Zikhula kumantla e-hemisphere kunye nemozulu ye-subarctic enwenwe ngaphezulu kweYurophu kunye nomantla weAsia. Ngenxa yobulukhuni bayo, imithi ye-birch ifuna izixhobo zamandla ukuyilungisa. Iinkuni zenzelwe ukuba zenziwe ngeplywood. Izicatshulwa zomthi weBirch ziguqulwa zaba yioyile yesikhumba kwaye yajika yaba yisepha kunye neshampu. Amagqabi awo enziwe iti. Abemi baseMelika basebenzise iinkuni ze-birch ukwenza amaphenyane kunye nezitya ngenxa yento engangeni manzi. Iikhabhathi zesithethi zisebenzisa iinkuni ze-birch ngokukodwa kwimvakalo yendalo. Umthi wayo uhlala ukhanya okanye utyheli ngombala.
Iingenelo zeBirch hardwood zibandakanya iinkozo zazo ezisisiseko zomthi, umbala omhlophe okhanyayo kunye otyheli, kunye nokukwazi kwayo ukungcolisa. Oku kuvumela imibala eyahlukeneyo kwaye kujonga iinkuni. Umxhasi ubandakanya ukuba ngenxa yokuba ingumthi othambileyo, iyakrwela kwaye ibambe ngokulula. Ngelishwa i-birch ikwakho nokuchaphazeleka ukufuma, oko kuthetha ukuba iya kuthi ikhontrakthi kwaye yande, iyenze ingazinzi. I-Birch yinto efikelelekayo kwaye ukuba nje ukhathalelo kunye nokucinga ngokubekwa kuthathiwe i-birch inokusetyenziswa ekhayeni.
Umthi we-teak ngumthi omkhulu ovela emazantsi nakumazantsi mpuma eAsia. Ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba yi-Burmese Teak. Xa iinkuni zisandula ukusikwa, zithumela ivumba elinjengesikhumba. Iinkuni zayo zimthubi tyheli kwaye zijika zibe mnyama zimnyama njengokuba indala. Kuthathelwa ingqalelo njengokhuni oluqinileyo, abantu baseAsia bezisebenzisa ekwakheni, amaphenyane, ifanitshala kunye nemikrolo.
Umthi we-teak uqinile kwaye awunamanzi. Uninzi lwezindlu zaseAsia zinomthi we teak njengefanitshala yephandle, iidesika zomgangatho, ukutyibilika ngaphakathi, imiphezulu yeetafile, iibhodi zokusika, iingcango, izakhelo zeefestile, imiqadi neentsika. Ngenxa yokuba amanzi omelele, athandwa kakhulu ekwakheni amaphenyane. (Ndwendwela eli phepha ukufumana ezinye iinkcukacha malunga ityesi yomthi )
Njengoko kukhankanyiwe iti ngumthi owomeleleyo, enyanisweni yenye yezona zinzima. Enye ipro teak enkulu kukuba xa ishiywe ingatywinwanga iya kubamba iioyile zayo zendalo kunye nobudala kakuhle njengoko ixesha lihamba. Ukuba ayisiyonyani leyo isafuna ukungcolisa kunye nokutywina ukugcina umbala ofanayo.
Kukho i-cons ezimbalwa xa kuziwa kwi-teak, ifuna ulondolozo oluncinci kwaye abathengi kufuneka bazi ukuba bayithengaphi le nto. I-teak ngumthi obiza kakhulu ngenxa yokufuna ukuthenga kumthengisi we teak oqinisekisiweyo. Abanye abathengisi baya kusebenzisa itiak kwiintlobo ezisemngciphekweni wentshabalalo eziyingozi enkulu kwisityalo. Le mveliso ayenziwanga eUnited States; Ke ngoko, iindleko ziqhutywa kwakhona ziindleko zokungenisa izixhobo.
I-bamboo ayisiyomthi wenene, kodwa yingca, isikiwe kwaye icinezelwe ngokudibeneyo ukwenza iiplanga. Ngenxa yolu bamboo inembonakalo yemigca ethe nkqo efanayo. Kukho ezinye iintlobo ngokunjalo, ezinje nge-tye kunye ne-strand ephothiweyo, eziya zibiza kakhulu ngenqanaba lokuxakeka. Ukutshintsha umbala okhanyayo wokuqala we-bamboo kufuneka ube nekhabhoni, eya kwenza ukuba ukuthamba komgangatho kuthambe.
Icala elisezantsi lokwenza uqalo kukuba yenye imveliso engaqhelekanga eyenziwayo e-US ethetha ukuba inokuba ne-VOCs enetyhefu kwaye ukuthunyelwa phesheya kunegalelo kubungqina bekhabhoni kunye nokongeza kwixabiso elipheleleyo lezinto. Funda ngakumbi malunga nokulunga kunye neengozi ze nokwadala uqalo Apha.
Kukho iindidi ngeendidi zemithi yeetsheri, kodwa eyona ntengiso isetyenziswa kakhulu yintyheri yaseMelika. Njengoko igama layo lisiyalela, yinzalelwane yase North America. Imithi yayo ithandwa kakhulu phakathi kwabasebenza ngamaplanga kuba luhlobo olujikelezwe kakuhle. Kulula ukuyikhohlisa kwaye ijongeka intle kungoko ihlala isetyenziselwa ukwenza iikhabhathi kunye nefanitshala. Ihlala ikhanya ngombala omnyama ubomdaka ngombala. Igcina ibala kunye nezinto zeglu kakuhle kwaye ikwafikeleleka ngakumbi kwezinye iintlobo zomthi, ezenza ukuba ibe lukhetho oludumileyo lwefanitshala kunye nemigangatho.
Iinkqubo zokhuni lwecherry kwaye ezinye zezizathu zokuba zezona ntlobo zidumileyo zinento yokwenza nobuhle bayo obubonakalayo. Umthi weCherry uvela kwimithi yecherry kodwa okungaxakekisi kukuba ngowona mbala uthandwayo kakhulu weenkuni ze-cherry uza ngombala obomvu, luhlobo olunjengamacherry. Olunye udidi oluhle lomthi wetsheri yingqolowa yalo, edla ngokuba ngumzekelo ongqongqo kunye nokujija. Into enomdla ukuba uyiqaphele kukuba i-American cherry ngumthi omhle othambileyo kunye nobunzima bokulinganisa i-950. Nangona kunjalo, isenza umsebenzi olungileyo ukugcina uzinzo. Ndwendwela igalari yethu ye Umthi weplanga ukufumana ezinye izimvo.
yintoni elungileyo ngamabhampu e-razor
I-cherry yaseBrazil yomthi obizwa ngokuba yi-hardwood ikwabizwa ngokuba yiJatoba kwaye ifunwa kakhulu ngenxa yomgangatho womgangatho kunye nobunzima obuphezulu kakhulu bokuqina kwe-2820. Olu hlobo lolunye lwezona zithandwa kakhulu kwimithi eqinileyo exotic esetyenziselwa ukutyibilika.
Kukho izinto ezimbalwa ezenzelwe ukugcina iinkuni ze-cherry engqondweni, i-cherry inokonakaliswa ngokukhanya lilanga ngenxa ye-photosensitivity yayo ephantsi. Ukuthintela ukonakaliswa lilanga, kuyacetyiswa ukuba le mithi ifakwe endaweni apho ingayi kufumana ilanga ngqo. Ngokuhamba kwexesha kunye nokukhanya kwelanga kumgangatho wecheri kuya kuba mnyama. Ixabiso elilumkileyo, icherry ikwicala eliphezulu.
IPine yenye yeendidi zemveli zemigangatho eqinileyo esetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwaye ityebile ngombala, kulula ukuyichaphazela, kwaye inenkozo enkulu enamaqhina. I-Pine ikwakhona kunye nokukhetha okusingqongileyo ngenxa yobuninzi bemithi yepayini ekhoyo. Olunye uphawu oluphambili malunga nepine kukuba yiminyaka emangalisayo, etshintsha inkangeleko ngokuhamba kwexesha.
Elona cala lililo elilelona liphantsi lepayini likwicala elithambileyo lomthi ngoko ke linokuchaphazeleka ngenxa yamazinyo kunye nemikrwelo, ke oko kufuna ulondolozo ngakumbi kunye nokhathalelo ekuhambeni kwexesha. Ukujonga amaxabiso nangona kunjalo, enkosi kubuninzi yenye yeenkuni ezifikelelekayo kumgangatho wokhuni oluqinileyo.
Intliziyo yepayini ligama elisetyenziselwa ukubiza umthi omhle womthi wepayini. Abasebenzi beplanga bayathanda ukusebenzisa olu hlobo lomthi ukomelela kwalo, ukuzinza kwalo, kunye nombala obomvu wegolide. Umthi wepayini uvela eMntla Melika. Ngenxa yeempawu zayo kwaye ifuna iminyaka engama-30 ukuba ikhule, umthi wepayini awufumaneki ngokulula. Ukutshatyalaliswa kwamahlathi kunye nokuvuna ngaphezulu ukusukela ngeentsuku zobukoloniyali kube nefuthe elikhulu kumthi wepayini. Okwangoku, yi-3% kuphela yehlathi laseLongleaf Pine lasehlathini elihlala eMelika.
ICypress luhlobo oluthile lwepine, olunika uninzi lweempawu ezifanayo. Umahluko ophambili kukuba i-cypress ineethoni zasebusika. Oku kwenza kube lula ukudibanisa nayiphi na eminye imithi. ICypress ikwanamaqhina amaninzi kwaye iyajikeleza kwiingqolowa zayo, ifihle ngaphezulu kokukhuhla kunye neentsimbi eziqinisekileyo zokuza ngenxa yokuthamba komthi.
Olunye uncedo lweenkuni ze-Beech kukugqiba kwayo okukhulu xa icocekile kwaye iphosiwe. Xa kuthelekiswa nomthi obomvu we-Oak, i-Beech ilapha ngezantsi kwayo kwisikali sobunzima, ukuyibeka embindini wokhuni oluthambileyo nolukhuni. Ngelishwa, oku kuthetha ukuba kuyakufuna ukugcinwa, kodwa lelo lixabiso olilihlawulayo ukugcina ixabiso liphantsi. Ixabiso leenkuni ze-beech lilungile ngezantsi kwemephu, lifikeleleka kakhulu.
Lo mthi uvela kwintshona yeMntla Melika. Iyaziwa ngokuba ngumthi omkhulu. Ngo-1995, umthi we-Douglas fir wabizwa ngokuba ngowesibini ngobukhulu emhlabeni ulandela ngasemva konxweme olubomvu. Olu hlobo lwathiywa ngegama lesazi ngezityalo saseScotland uDavid Douglas owayengowokuqala ukunika ingxelo ngeempawu zabo ezingaqhelekanga.
UDouglas Fir ngumthi ofudumeleyo osisityebi kunye nombala kwaye uhlala usetyenziswa kuyilo lwesiko. Zonke iziqwenga zikaDouglas Fir ziya kufana kakhulu ukuba azifani. Lo mthi uya kuba ngumbala o-orenji-mdaka ukuya kumbala otyheli okhanyayo kunye neenkozo ezichanekileyo. Ihlala isetyenziswa njengemithi kunye neplywood. Iziqwenga ziya kuba zinde kakhulu ngenxa yokuphakama kwemithi.
I-con enkulu ye-Douglas Fir yenye yezona ndawo ziluhlaza ezithambileyo ezikhoyo nge-U.S Janka rating ye-660. Oku kuthetha ukuba kuya konakala ngokulula kwaye kuya kufuna ukugcinwa rhoqo kunye nokugcinwa. Ngenxa yale Douglas Fir ngumthi ophantsi kakhulu onexabiso eliphantsi lomgangatho.
Xa ucinga ngexabiso lezinto zokwakha ezifuna ukuthengwa khumbula ukuba esi sisikhokelo nje. Amaxabiso aya kwahluka ngokuxhomekeka kubukho, indawo yokuthenga, ubungakanani, ubukhulu, ubukhulu, kunye nendawo yokusetyenziswa. Jonga inkampani yakho yendawo yokubeka umgangatho ngamaxabiso ngqo kwindawo okuyo. Apha ngezantsi kukho uqikelelo lwendleko nganye yohlobo oluthile lomgangatho.
I-Oak emhlophe -Ukufakwa kwe-DIY: $ 8- $ 12 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 12- $ 15 ngonyawo wesikwere.
I-Oak ebomvu -Ukufakwa kwe-DIY: $ 7,9 yeedola ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 11- $ 14 ngonyawo wesikwere.
Walnut -Ukufakwa kwe-DIY: $ 11- $ 13 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 15- $ 17 ngonyawo wesikwere.
I-Ash-DIY yokufaka: $ 6- $ 9 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 7 $ 10 ngonyawo wesikwere.
Mahogany -Ukufakwa kwe-DIY: $ 8- $ 14 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobungcali: $ 14- $ 16 ngonyawo wesikwere.
I-Hickory -Ukufakwa kwe-DIY: $ 3- $ 5 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 5- $ 8 ngonyawo wesikwere.
Imephu-Ukufakwa kwe-DIY: $ 11- $ 13 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 15- $ 18 ngonyawo wesikwere.
I-Birch -Ukufakwa kwe-DIY: $ 9- $ 12 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 13- $ 16 ngonyawo wesikwere.
Teak -Ukufakwa kwe-DIY: $ 10- $ 13 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 12- $ 17 ngonyawo wesikwere.
I-bamboo -YAKHO ukufaka: $ 2- $ 6 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 4- $ 8 ngonyawo wesikwere.
I-Cherry -Ukufakwa kwe-DIY: $ 14- $ 18 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 18- $ 23 ngonyawo wesikwere.
Pine -Ukufakwa kwe-DIY: $ 3- $ 6 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 5- $ 8 ngonyawo wesikwere.
Beech -Ukufakwa kwe-DIY: $ 5- $ 8 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 8- $ 10 ngonyawo wesikwere.
ICypress -Ukufakwa kwe-DIY: $ 5- $ 8 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 8- $ 10 ngonyawo wesikwere.
UDouglas Fir -Ukufakwa kwe-DIY: i-2- $ 5 ngonyawo wesikwere. Ukufakwa kobuchwephesha: $ 5- $ 7 ngonyawo wesikwere.
Enye yezona ndawo zibalaseleyo zomgangatho okhuni bubomi babo obude, kodwa ukugcina iinkuni zomelele ziya kufuna ukucokiswa kwinqanaba elinye okanye elinye. Ukuhamba rhoqo kuya kuxhomekeka kukhathalelo oluthathayo kumgangatho kunye nobungakanani bendlela abayisebenzisayo.
Kuxhomekeke kumgangatho womgangatho kunye nokugqitywa komgangatho wasekhohlo komgangatho ngaphambi kokucokiswa kuya kuba yinto enkulu yokuzimisela xa kufikwa kumba wokucokiswa komgangatho wokhuni oluqinileyo. Ngokuqhelekileyo. Umsebenzi ogqityiweyo uya kukuqhuba naphi na ukusuka kwi-1.50 yeedola ukuya kwi-4 yeenyawo zenyawo nganye ukucoca umgangatho.
Umthi oLukhuni ekuThengweni kokuKhetha ukuHombisa Iipateni zoMgangatho weenkozo zomthi okhuni
Inkangeleko yemigangatho eqinileyo yomthi ixhomekeke kwindlela owagawulwa ngayo umthi kunye neempawu zengqolowa ngokuxhomekeke kuhlobo lwayo. Xa ukhetha imigangatho yomthi onzima, le yinto yokuqala abathengi abayithathayo. Bafuna ukuqinisekisa ukuba imigangatho iya kudibana nenkangeleko abayifunayo kumagumbi athile. Iimpawu zokuqala zibalulekile ngokwenene.
Xa ukhetha i-hardwood flooring yekhaya lakho into enkulu iya kuba yingqolowa yomthi. Olunye ukhetho kukutya okuziinkozo okugudileyo, oku kunika ubume obusezantsi kakhulu yenye yezona ngqolowa zithandwa kakhulu ngomthi wokhuni oluqinileyo.
Ukutya okuziinkozo okuthambileyo kunika ukuziva okugudileyo, okuthambileyo ngaphandle kwamaqhuma anzima kakhulu. Olunye ukhetho kukutya okuziinkozo okuvulekileyo, oku kufumaneka rhoqo nge-oki kunye ne-hickory woods. Le mithi inee-pores ezinkulu, ezenza ukuba zibonakale ngakumbi kwingqolowa.
Xa usika iinkuni zikwasika ii-pores zenza imiphetho kunye nentlambo kwisiqwenga somthi ngokuchaseneyo nengqolowa egudileyo. Isiqwenga ngasinye sahluke ngokupheleleyo ngokwendlela iinkuni ezihlala ngayo. Olunye ukhetho inokuba yingqolowa ye-echo, eliqhina kunye 'ne-echo' yemilo ephindaphindwe kwiifom ezinkulu ngaphandle kwayo.
Ukukhethwa kobubanzi beebhodi zomthi onzima kubalulekile kwimozulu ozama ukuyenza. Iibhodi ezibanzi ziya kuba ngcono kwigumbi elikhudlwana, elivulekileyo ngakumbi, kodwa aliyi kuba luncedo kwiindawo ezincinci, kunye nokuphikisana kweebhodi ezincinci ezenza igumbi elincinci libukeke likhudlwana.
Ngokwesiqhelo, zininzi kuphela ezikhethiweyo zobubanzi eziziziqwengana kunye neeplanga. Imigca ziibhodi eziphantsi kwe-3 (zihlala ziyi-1½-2 ¼) ngelixa iiplanga zingaphezulu kwe-3 (zihlala zi-3- 8) ububanzi. Kukho ezinye iindlela ezikhoyo ezikhoyo kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho: iipariti, izikwere kunye nezikwere.
Olunye ukhetho ngumgangatho weeplanga ububanzi oqhele ukulinganisa ukuya kwi-10 ″ ububanzi. Ukongeza ekubeni zibanzi ngokubanzi ezi ntlobo zeeplanga zomthi zihlala zisebenza ixesha elide ubude. Imigangatho yeplanga ebanzi emide kwaye ibanzi inganciphisa inani lezihlalo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 ngaphezulu kweebhodi eziqhelekileyo.
Imithunzi emnyama yeplanga ebanzi kukhetho olufanelekileyo kumagumbi esitayile esiqhelekileyo. Ngelixa umbala okhanyayo okhanyayo kwimigangatho yeplanga ulungele uyilo lwangoku okanye lwangoku.
Inqanaba libhekisa kwinkangeleko yomthi. Xa umthi uhlelwa, ezi zinto ziqwalaselwa: inani kunye nobungakanani bamaqhina, ubungakanani bencindi ekhoyo emthini, kunye nokwahluka kombala okufumanekayo. Ukubeka nje, amancinci amaqhina, isixa esincinci sencindi, kunye nombala ofanayo, kokukhona inqanaba liphezulu kwaye ke liphezulu ngokwexabiso. Ndwendwela iphepha lethu malunga Ixabiso lomgangatho wokhuni ngolwazi oluthe kratya malunga nokwahluka kwamaxabiso phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zemigangatho elukhuni.
Amabakala e-hardwood asetyenziswa ngokuxhaphakileyo ngala: Cacisa ibakala, khetha kwaye ungcono, # 1 eqhelekileyo, # 2 ibakala eliqhelekileyo kunye nekhabhathi. Ezi zinto zinokusetyenziswa kuphela ngokubhekisele kumgangatho oqinileyo wokhuni oluqinileyo. Umgangatho wenjineli yomthi onzima awusebenzisi inkqubo yokuhlela, zihamba ngaphezulu kwegama lemveliso kunye neempawu, nganye iya kufakwa kudidi ngokusekwe kubuhle babo, ukugqiba kunye nokugaya.
Kwaziwa njengeyona nqanaba lokuqala, eli lelona banga liphezulu lomgangatho wokhuni. Iimpawu zeli bakala zibandakanya amaqhina amancinci, ibakala liyifomu efanayo, kwaye umxholo womdaka uphantsi kakhulu. Inqunyulwe ukusuka embindini welog. Inemibala eyahlukeneyo eyahlukileyo ngoko ijongeka ifana iyonke.
Ikwabizwa ngokuba libakala le-ABC, khetha iinkuni lelona banga liphezulu. Iimpawu ngamaqhina ambalwa, isixa esithile sencindi, kunye nokwahluka kombala. Inemigca encinci kunye nokwahluka kombala wendalo.
Amanye amagama ahambelana neli bakala kubandakanya ibanga lokukhetha eliphantsi, ibakala lendalo, kunye nenqanaba leABCD. Umthi unamaqhina amakhulu, umahluko ngakumbi kumbala ukusuka ekukhanyeni kuye kumnyama, imigca yezimbiwa kunye neentshulube. Eli nqanaba lifumaneka kuphela kwisiseko sokufumana njengepesenti encinci yokuhlelwa xa uzama ukuvelisa ukhuni olucacileyo okanye inqanaba lokuqala.
Ikwabizwa ngokuba libanga le-rustic, kukho umahluko omkhulu kumbala, ubungakanani besap kunye nenani lamaqhina. Ibonisa ukubukeka kwendalo kunye nemveli yokuvuna.
Ngelishwa inqanaba ngumgangatho owahlukileyo, ngokusekwe kumenzi ngamnye okanye kwimibutho eyahlukeneyo. Imigangatho emininzi isekwe kwindlela obonakala ngayo umgangatho xa kuthelekiswa nokusebenza kwayo. Oku kuthetha ukuba nokuba i-flooring ibakala eliphezulu ayithethi ukuba iya kuba yimveliso esemgangathweni ephezulu, imbonakalo eyahlukileyo yokubonakalayo.
Umzekelo, nokuba isiqwenga somthi sinemigca emininzi yezimbiwa, umahluko ongaphezulu kombala, okanye amanqaku omlinganiswa aya kulitshintsha ibakala. Oku kwenzeka ngenxa yendlela iinkuni ezigawulwe ngayo nokuba kungokucacileyo, ukuqhekeka okanye ikota. AmaBakala anokuhlulahlula ubude beebhodi, inqanaba elisezantsi njengeebhodi ezimfutshane kwaye ngaphezulu ukuya ngaphezulu.
Njengoko igama libonisa, ukusika kubhekisa kwindlela ukusikwa kwamaplanga kwizikhuni. Oku kubalulekile kuba kumisela inani kwisiqwenga somthi onzima. Ikwachaza ukuqhelaniswa kwamakhonkco okukhula kumanqwanqwa okuphela kwaye ichonge uhlobo lweemithi. Kukho iindidi ezine ezahlukeneyo zokucheba umthi onzima: i-plainsaw, i-quartersawn, i-riftsawn kunye ne-livesawn.
Le yeyona ndlela iqhelekileyo yokusika imithi. Ikwabizwa ngokuba yisarha ecabaleleyo. Kukwasisi esincinci esinexabiso. Iziphumo zibonisa ipathedral pathedral ebusweni bebhodi.
Oku kunqunyulwa kuyabiza ngaphezu kwe-plainsaw, kodwa inepateni entle yokutya okuziinkozo. Igama lalo lithatyathwa kwinto yokuba iinkuni zisarha kwi-engile ye-radial kwiikota ezine.
Kuzo zonke izicucu, i-riftsawn yeyona ibiza kakhulu kwaye yeyona ixhaphakileyo. Iyafana nekota ebonwe ngaphandle kwee-ray, kwaye ikwasetyenziselwa ukuyincoma. Indlela yokuvelisa i-riftsawn ithathwa njengenkunkuma yiyo loo nto ixabiso liphezulu ngokuthelekiswa nolunye usiko.
Oku kunqunyulwa kukudityaniswa kwe-plainsaw, i-quartersawn kunye ne-livesawn. Iigodo zisikwe ngokuthe ngqo ngaphandle kokuguqula ilog. Ngokungafaniyo nokunye ukusika, i-livesawn isebenzisa ilog yonke ukuze kungabikho nkunkuma. Oku kunqunyulwa kuhlala kubomi bonke kwaye kujongeka ngokwendalo.
Kuluhlu lweentlobo zemigangatho yomthi onzima omnyama kukho ezi zinto zifumanekayo: I-Walnut igcwele imibala emnyama etyebileyo ngombala omfusa. I-Wenge ngumbala ophantse ube mnyama, sebenzisa xa ufuna ukongeza umahluko omkhulu. Eminye imithi emnyama ibandakanya: i-rosewood, i-acacia kunye ne-teak.
Zininzi iindidi zemigangatho elukhuni eqinileyo: I-Oak yenye yezona ndawo ziphambili zomgangatho oqinileyo okhanyayo kubandakanya zombini i-oki emhlophe kunye ne-oki ebomvu, i-oki emhlophe inzima kwaye iyaxinana ngelixa i-oki ebomvu ibomvu ngokwendalo kwaye inemibala emininzi. I-birch etyheli imthubi ococekileyo kodwa inokwahluka naphina ukusuka kumbala omdaka obomvu. Olunye ukhuni olukhanyayo olunemibala eqaqambileyo lubandakanya: uthuthu, i-beech, i-hickory, imephu kunye noqalo, ezinye iinkcazo zinokufumaneka apha ngasentla.
Ukugqitywa kweenkuni eziphambili akugqitywanga okanye kugqityiwe. Umthi ugqiba ngokusisiseko iinkcukacha zendlela ezivela ngayo kumenzi. Ungaphazanyiswa kukugqitywa komhlaba, esiza kukugubungela ngakumbi apha ngezantsi.
Umgangatho ongagqitywanga wokhuni olomeleleyo kuthetha ukuba umthi ukwimo yawo eluhlaza. Imigangatho iya kuba yisanti kwaye igqitywe kwisiza. Uncedo lokusebenzisa imigangatho engagqitywanga yomthi onzima unokuzisa iindlela ezahlukeneyo zamabala ukuze utshatise igumbi kwaye uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eyona isebenzayo. Umgangatho ongagqitywanga wokhuni olomeleleyo yenye yeendlela ezisemgangathweni ezinokukhethwa kuba emva kokuba ifakwe ifakwe kwisanti ngoko nangoko, ibangela ukuba zonke iibhodi zilingane ngokulingana. Ziyabiza kakhulu kwaye ziyaguquguquka ngokubhekisele kokugqibayo okufunayo. Unokukhetha owona mgangatho uphezulu wokugqiba ukwenza ukuba imigangatho ibonakale imangalisa.
Kwiiprojekthi ezinkulu zokwakha, uninzi lweekhontraktha zikhetha ukugqiba imigangatho ukuya esiphelweni. Ngale ndlela, akukho mfuneko yokuba bathathe amanyathelo okhuseleko xa bengenisa izixhobo okanye izinto ngaphakathi nangaphandle kwesiza. Ukungancedi kukuba kungathabatha iintsuku okanye iiveki phambi kokuba imigangatho ihanjwe kuba kufuneka ixesha lokoma. Okwangoku, isiza siza kunukisa izinyibilikisi ezazisasazeke phantsi.
Ngelishwa, ukutyibilika okungagqitywanga kunokuba ngumsebenzi odla ixesha, njengoko kunokuthatha iintsuku ukufakela, isanti, ibala kunye nokugqiba iinkuni, ngakumbi ulinde ukuba wome umgangatho kwaye uphephe nayiphi na into enetyhefu enokuthi ikhuphe. Oku kunokuba yindlela yokonga iindleko ngakumbi ukuba ucwangcisa ukwenza ubala kunye nokutywina njengeprojekthi ye-DIY.
Ifektri igqibile imigangatho yomthi onzima sele igqityiwe ngumenzi. Zilula kwaye ziyakhawuleza ukufakela kuba akukho mfuneko yesanti okanye ukuzigqiba. Nje ukuba ifakwe, imigangatho inokuhamba kwangoko. Nangona kunjalo, zibiza kakhulu kuba zonke zisetelwe ukufakwa. Uninzi lofakelo lunokugqitywa kwangolo suku kuxhomekeke kubungakanani bendawo leyo. Akukho micimbi yokuhamba kwifenitshala kanye emva kofakelo. Kuba zigqityiwe kumvelisi, akukho umphunga ungafunekiyo unokuvumba wakube ufakiwe.
Umgangatho ogqityiweyo wokhuni olomeleleyo uya kuba nofakelo olukhawulezayo ngenxa yokuthatha amanyathelo okubala kunye nokutywina imveliso. Olunye udibaniso kumthi owenziwe kwangaphambili uyazi ukuba ngowuphi umbala oza kuba kuwo xa uwukhetha, ngokuchaseneyo nokulinda ukubona ukuba ulisebenzisile inani elifanelekileyo lebala okanye yintoni. Oku kuyakunceda xa ufuna ukulungelelanisa zonke izinto ezigqityiweyo ekhaya.
Ngaphambi kwexesha lomgangatho wobunjineli, imigangatho elukhuni yonke yayisenziwa ngesandla. Ukukrwela ngesandla imigangatho elukhuni yindlela eqinisekisa ukuba iiplanga ziyalingana kwaye akukho sikhewu. Ngokwesiko incakuba yemela esetyenzisiweyo isetyenziselwa ukukrwela umthi ube mpuluswa. Kuba oku kwenziwa ngesandla, lolona khetho lubiza kakhulu kwaye kufuna isandla esinamava. Obu buchule bubonisa ukubonakala kwendalo komthi kwaye bufihla naziphi na iziphako ezincinci. Olu khetho lufanelekileyo kumagumbi azaliswe ngumsebenzi.
Isandla somthi okhuni osikiweyo yenzelwe ukunika ujongo oluxineneyo kumgangatho weenkuni. Lo mgangatho ukhethekileyo wenziwe ngenjongo yokuba ubonakale umdala kwaye unxibile. Ngokwesiqhelo, imigangatho ayikhutshelwa ngesandla, kodwa ngomatshini. Eminye isenziwa ngesandla, kodwa iya kuba lukhetho olunendleko, kodwa uya kube uhlawulela ubukhethekileyo beenxalenye zeenkuni. Le ndlela inokwenziwa kuzo zombini iintlobo zomgangatho oqinileyo okanye wobunjineli.
Ukugqitywa koxinzelelo kufezekiswa ngokwenza ngabom ukubonakala komphezulu womthi ngesandla ukuwunika ukubonakala okugugileyo nokwalupheleyo. Eminye imithi inokubandezeleka ngokulula kunabanye. Iiplanga ezincinci ezixineneyo ezifana nepayini, i-oki kunye nezinye iintlobo zoqalo zezona zilungileyo zokufumana uxinzelelo. Hlala kude neenkuni ezixineneyo ezifana necherry yaseBrazil okanye imephu njengoko ezi zingathathi kwinkqubo ngokunjalo. Nje ukuba ukhuni lubandezeleke ungalwenza ibala uze ulipolishe ukuze ulikhusele kwaye uligcine likhangeleka lilihle.
Umgangatho ophantsi womthi yindlela entle yokufezekisa ukubonakala kweenkuni ezibuyisiweyo ngaphandle kokuhlawula idola ephezulu. Iplanga elibanzi imigangatho yeenkuni enexinzelelo iyafumaneka kwabo bafuna ukubonakala kwendabuko ngakumbi. Ukongeza uxinzelelo lweplanga olubanzi kunokunceda ukudala ukukhohlisa kwendawo enkulu, kunye nokubonisa iimpawu zomthi.
Ukugqitywa kweenkuni umphezulu linyathelo lokugqibela kwinkqubo yokuvelisa ukunika inkangeleko oyifunayo kunye nokukhusela iinkuni kufuma kunye nokonakaliswa kwendalo. Imigangatho eqinileyo yomthi egqityiweyo kulula ukuyicoca nokucoca.
Amanzi agqityiweyo asezona zezona zidumileyo phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zokugqitywa komgangatho okhuni. Inika imigangatho ukukhanya okukhazimlayo kunye nokutyikitya okumanzi. Oku kugqitywa kwenza imigangatho yomthi onzima ukugcinwa okuphantsi kakhulu kuba kulula ukuyicoca kwaye kuhlala ixesha elide. Umthi onzima uhlala kumbala wendabuko kwaye awuguquki utyheli ngokuhamba kwexesha. I-Urethane esekwe emanzini yimveliso enevumba eliphantsi, ekulula ukuyicoca kunye nokomisa ngokukhawuleza. Oku kuyenza ifaneleke kwiprojekthi ye-DIY.
I-urethane esekwe kwioyile yenye yezona zinto ziqhelekileyo ekukhetheni ukugqitywa komhlaba. Kungenxa yokuba yayinokhetho lwe-gloss, i-glass-glass kunye ne-satin sheens. Ikwabizwa ngokuba kukugqitywa kokutywina ioyile, olu lolona khetho lufanelekileyo kwabo bakhetha ukwenza i-DIY imigangatho yabo yomthi kuba kulula ukuyenza.
Inkqubo yokungena ngaphakathi inyusa umbala weenkuni kwaye ibonakalise iinkozo. Imigangatho inokugqitywa kwakhona kwixa elizayo. Ikwajongwa njengokuhlala ixesha elide kakhulu kwaye ikhusela iinkuni zakho ukuba zihlale ixesha elide. Esi sisiphelo esona sigqibeleleyo samagumbi emveli kunye namagumbi amandulo ngenxa yokugqitywa kwesiko okukuzisayo. Ezi zigqityiweyo zihlala zi-amber ngombala.
I-urethane esekwe kwi-oyile ithatha malunga neebhatyi ezi-3 nganye enamaxesha okusoma ayi-8. Le mveliso iya kufuna ukungena komoya kwaye kuba isekwe kwioyile iya kuba tyheli ngokuhamba kwexesha.
Ukunyanga okuphilileyo kwe-Urethane yimveliso ehlala ixesha elide, ngenxa yoko isetyenzisiwe ngakumbi kwiiprojekthi zorhwebo kunye ne-DIY encinci.
Ukugqitywa kwe-acid ephilileyo kukwabizwa ngokuba sisiphelo seSweden. Yomelele kakhulu kwaye igqibelele ukutyibilika ngombala kunye nemithi engaqhelekanga. Inika ukhuseleko olongezelelekileyo kwiinkuni. Ukungancedi kukuba oku kugqityiweyo kunamanqanaba aphezulu etyhefu ngexesha lokunyanga elinokuthi liqhubeke ukuya kwinyanga.
Ukuguqulwa kweVarnishi yimveliso enevumba eliphezulu kakhulu kunye nemisi eya kufuna umoya owaneleyo ngokwaneleyo. Oku akukwacetyiswa kwiiprojekthi ze-DIY.
Olu hlobo lokugqiba luthathwa njengoluphelelwe lixesha kwaye luphelelwe lixesha ngabathile, kodwa ngokuthe ngcembe ukubuyisa ukuthandwa kwalo. Ilungele abalandeli be-DIY, kulula ukuyifaka nkqu nakumninimzi ongenamava. Ioyile ye-wax enzima inika imigangatho elukhuni imbonakalo efudumeleyo kunye nesiphelo esisezantsi sokukhanya. Ayomelele njengokutywinwa kweoyile kunye nokugqitywa okusisiseko kwamanzi, ke kuyacetyiswa ukuba uphinde ufake isicelo sokugqiba yonke iminyaka emi-2 ukuya kwemi-3.
Eyona ihlala ixesha elide kwaye ihlala ixesha elide kuzo zonke izinto ezigqityiweyo, i-aluminium oxide inokuhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-25. Olu gqibelo lusebenza kakuhle kumgangatho okhuni onobunjineli ngenxa yokuhombisa kwabo. Nangona kunjalo, ukuba uthatha isigqibo kolu hlobo lokugqiba, ukhetho lwakho kuphela ziiplanga ezigqityiweyo. Olu khetho lubhetele ukuba ufuna ukufakwa kwangoko.
Ukungena ngokugqityiweyo kugqityiwe okungena nzulu ngaphakathi kweenkuni ezigqityiweyo. Oku kuhlala kusetyenziswa kulandelwa yi-wax yokujonga okukhazimlayo okuphantsi. Oku kuyakudinga ukugcinwa njengoko i-wax ifuna ukuphinda isetyenziswe kwaye ibe nezithintelo zokucoca.
Ezi zigqityiweyo ziya kuba ne-sheen ethile, i-Gloss ephezulu, i-gloss ephantsi kunye nebala. Ukuqaqamba okuphezulu kuya kunika ukuqaqamba kobuchwephesha kodwa kuya kuba lula ukuba bakrweleke. Kwindawo yokuhlala kuhlala kucetyiswa ukuba kusetyenziswe i-low-gloss or satin finish. Oku kuyakufuneka ukhethe xa ugqiba umbandela okanye ukuba ugqityiwe kwangaphambili xa uthenga loo mbandela.
Ngokwesiqhelo xa kufikwa kwinqanaba lokuqaqamba, i-glossier yokugqiba kukukhanya ngakumbi okuya kubonakala kunye nokukrwela okungaphezulu okuya kubonisa.
Ngaphandle nje kokugqitywa kwezinto ezibonakalayo, indlela oyibeka ngayo inokwenza uyilo olukhulu lweentlobo ezahlukeneyo zeenkcukacha zomgangatho ziyafumaneka.
Ukufakelwa yindlela esebenzisa imibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu beenkuni ukwenza iziqwenga zobugcisa zokuhombisa ngaphakathi emgangathweni. Ezi zinokubekwa kwangaphambili kwaye zimiselwe kwangaphambili okanye zinokwenziwa ngokwesiko ngeprojekthi nganye. Okukhona kusiba yinkimbinkimbi ngakumbi, iya kuba ngumvuzo.
Imida yile ndlela ivakala ngayo, kwaye njengenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu yoyilo kumgangatho wokhuni kulula ukufezekisa. Umda kulapho kukho umgangatho ophambili kumbala omnye okanye imilo, apho (umda) ojikeleze indawo eyahlukileyo umbala, imilo okanye isitayile, uhlobo lokucacisa igumbi.
Medallions luhlobo inlay ukuba ubudala ubudala kwaye wadala ngokuba isangqa (medallion) inlay ibekwe kwi nokwadala. Bona Okuninzi igumbi lokuhlala elinomthi oqinileyo izimvo apha.
Ukufakwa kwe-DIY vs Professional? Xa uthatha isigqibo sokuba uyokujongana neprojekthi yakho yomthi okhuni okanye uqeshe ingcali, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele. Okokuqala, ezinye iintlobo zomgangatho ziya kuba nzima ukuzifaka kunezinye ngokusekwe kububanzi, ubukhulu kunye neentlobo. Kukho ezinye iindlela ezingayi kufuna iglue, istaples okanye iinzipho. Nangona kunjalo uninzi lwezinto onokukhetha kuzo zifuna enye yezi, thathela ingqalelo amandla akho okusebenzisa ezi zixhobo ngendlela eya kwenza ukuba ukujinga komhlaba kubonakale ngqo.
Ukuba awuqinisekanga ngesakhono sakho, khetha imveliso elula oza kusebenza nayo, okanye uqeshe ikhontraktha yobungcali. Ngamanye amaxesha ukuqesha ingcali kuya konga imali ekuhambeni kwexesha, kwaye ngokuqinisekileyo kuya konga ixesha kunye noxinzelelo.
Zininzi izinto onokukhetha kuzo kwizambatho ezingaphantsi ezinokukhethwa ukuba ungene phantsi komgangatho wokhuni oluqinileyo, kukho iiphedi ezisisiseko zegwebu, iiphedi zegwebu ezinokukhusela ukufuma, iipads ezaziva zikhuselekile ngesandi, ngakumbi iimpawu ofuna ukuba ngumrhwebi kunye nokujiya imveliso iya kuba. Kukho abavelisi abaya kudala ezabo izindlu zangaphantsi ukuze bahambe nomgangatho wabo, okanye benze nje iingcebiso abanokuthi bazisebenzise ngokusekwe kwiimveliso zabo.
Rhoqo baya kufuna ukuba ulandele iingcebiso zabo ukugcina iwaranti yabo isebenza. Ukongeza kwizinto ezisezantsi ezikhankanyiweyo ngaphambili, Umgangatho wokulaminita Ngamaxesha athile ukuthungwa sele kwakhiwe kwiibhodi, kodwa ngesiqhelo yeyona nto iphambili, kusacetyiswa ukubeka umqobo wokufuma. I-Cork lolunye ukhetho olusemthethweni lokufihla kwaye ifumene ukuthandwa kumaxesha akutshanje. Ikhorki yimveliso yendalo kwaye sisixhobo esinokuhlaziywa. Ngokumelana namanzi (kungangeni manzi), ukubulala isandi kunye neempawu zokulwa neentsholongwane kwenza ukuba kusongelwe iziqwenga.
Ukufakwa komgangatho odadayo: Ukwenza umgangatho ongaphantsi wendlu kubalulekile. Oku kuya kuhamba ngaphezulu komthi okanye ukufaka ikhonkrithi kwaye kuya kufuna ukusetyenziswa kweenjineli okanye i-laminate flooring. Ukubekwa ngaphantsi kuyafuneka kuba umgangatho uza kudada okuthetha ukuba ayizukuchaphazela i-subfloor. Kukho indawo eshiyekileyo ukuze ukutyibilika nokwandisa kunye nekhontrakthi, ukubekwa ngaphantsi kunika uhlobo lomqamelo, isithintelo sokufuma, kunye nesithintelo sesandi somgangatho ongaphezulu kwawo. Ukukhuselwa kokufuma kubaluleke ngakumbi xa unesiseko sekhonkrithi.
Isikhonkwane ezantsi kunye nokufakwa kufakelo oluqhelekileyo: Sebenzisa isikhonkwane phantsi okanye isiseko sokufaka ubuchule bokufaka kuya kufuneka kuqala ube neplanga yokhuni. Ungayisebenzisa le ndlela nokuba yomelele okanye ibunjwe ngomthi onzima. Ngaphezulu komgangatho wokhuni kuyacetyiswa ukuba ubeke phantsi ngaphantsi. Oku kunokuba yiphepha elimnyama eli-15 lephepha, oku kuya kunceda ukuthintela nakuphi na ukufuma okuvela ngaphantsi komgangatho. Ngokwesiqhelo ukufakwa kwephepha elivakalayo kwaye kulula kwaye kungabizi mali, iphepha liza kuluhlu olukhulu olunokusasazeka nje kwisiseko esingaphantsi.
Glu Down Ufakelo: Inkqubo yeglue phantsi inokusetyenziswa kuninzi lwezicwangciso kodwa iyafuneka xa une-subfloor ekhonkrithi. Kungenxa yokuba ukubethelelwa okanye ukubethelelwa phantsi kumgangatho wekhonkrithi kungqineke kungaphantsi kunenzuzo. Le ndlela ingasetyenziselwa ukutyibilika komthi okhuni kunye neeparquets. Kukho rhoqo iziqinisekiso ezithile kumgangatho ongaphantsi onokuchaphazeleka ziindidi zeglu onokuzisebenzisa ukuze uqiniseke ukuba ujonga oko ngaphambi kokuthenga kunye nokufakwa.
Ulwandiso loMgangatho weHardwood Space: Njengoko sele kukhankanyiwe, iibhodi ziya kwanda kwaye zingene kwisivumelwano namaqondo obushushu ngenxa yoko kufuneka kubekho indawo eseleyo yokuphendula ngayo. Xa ufaka kuyacetyiswa ukuba usebenzise i-tap shipered tapered against the walls to keep about 3/8 to ½ of space around walls and columns. Kuba ibhodi yesiseko iya kubekwa apha iya kuvumela iibhodi ukuba zihambe kancinci ngaphandle kokubangela ukuphazamiseka.
Ukulungiselela umgangatho wofakelo: Ezinye zezinto ezityibilika ingqondo xa uthatha isigqibo sokuthatha iprojekthi entsha ye-DIY ngumsebenzi wangaphambili oza nayo. Imiyalelo yoMvelisi iya kuba ngumhlobo wakho osenyongweni okanye olona tshaba lubi, masenze ukuba ibe ngumhlobo osenyongweni ngokuzifunda kakuhle kwaye silandele imiyalelo yazo.
Qinisekisa ukuba i-subfloor icocekile kwaye ayinayo inkunkuma. Umgangatho ongezantsi uya kudinga ukuba ube kwinqanaba kwaye, nokuba ungaphezulu kwe ¾ ucime emva koko kuyakufuneka ufumane umgangatho wokudibanisa wokulinganisa ukuze ulungise. Isinyathelo sokugqibela sokulungiselela kwangaphambili kukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi indlela yokubeka umgangatho kwaye ufumane izixhobo ezifanelekileyo, izixhobo kunye namandla.
Izixhobo ezifunekayo ukufaka uMgangatho oQinisekileyo: Kuxhomekeka ekubeni uthathe isigqibo sokubethela isikhonkwane, ukutya okokoko okanye ukunamathela ukutyibilika komthi wakho onzima kuya kuchaphazela kakhulu izixhobo kunye nezixhobo oza kuzifuna xa ufakela, kunye nobungakanani beebhodi zakho. Flo ukutyibilika okuqinileyo kuya kufuna umpu omkhulu wezikhonkwane kwaye kuya kufuneka kwakhona imbumbulu yentsimbi. Kukwakho nomoya oncediswayo ngemipu yezikhonkwane zomoya kunye neekhomputha. Oku kuyakufuna imalethi yerabha.
Ukutyibilika okucekeceke kuya kuba nakho ukusebenzisa ii-stapler zokutsala kunye nemipu encinci. Kwimigca embalwa yokuqala kodwa, umpu okhankanyiweyo uya kuba namandla, kule meko kuya kufuneka unike isikhonkwane, esiya kufuna isando kunye nezikhonkwane, okanye usebenzise isikhonkwane somoya esincediswayo. Ezinye izinto ezinokufuneka sisarha, i-pry bar, iinzipho, izithuba zesithuba, imigca yetshokhwe, isikwere sabachweli, ukubhola kunye neebhithi zokomba.
Bukela ividiyo xa ufaka ugcino lomthi oluqinileyo
Inkqubo yokufaka: Ngokwesiqhelo iindonga zangaphandle ziya kuba lelona cala linayo ekhayeni, ke iya kuba yeyona ndawo ilungele ukuqala emva kokuba wonke umsebenzi wokulungiselela ugqityiwe. Qala ngokusebenzisa iibhodi ezinde kakhulu (ukunqanda ukusika iziqwenga ezingaphezulu).
Ngokwesiqhelo, uya kufuna ukugcina iphepha eliva umva emva kwee-intshi ezi-4-5 kwaye uncamathisele imiqolo embalwa yokuqala kunye nobuso bokubethelela zonke ii-intshi ezisi-8 kumqolo ongasemva ongaphezulu webhodi. Oku kubalulekile kuba ukuba le miqolo ayithanga tye, akukho namnye umgangatho oya kuba. Kuyacetyiswa ukuba uncamathisele umtya okanye into ethile ukuqinisekisa ukuba iibhodi zokuqala zihlala ngokuthe nkqo kufakelo.
Sebenzisa i-shims kuyanceda ukwenza umsantsa njengoko kuchaziwe ngaphambili. Ngelixa ukuyifaka kuyacetyiswa ukuba kudityaniswe iibhodi kwibhokisi nganye kuba imibala kunye neenkozo ziyahluka kancinci kwaye oku kuyakwenza ukubonakala kwendalo.
Ukunyanzeliswa komgangatho: Inxalenye ebalulekileyo yokufaka i-hardwood flooring abantu abaninzi abangacingi ngayo ngokuvumela i-flooring yakho ukuba ihambelane. Emva kokuzisa i-flooring kwindawo entsha enobushushu obahlukeneyo kunye namanqanaba okufuma kulungile ukuba ungafaki iiplanga zomgangatho ngoko nangoko. Oku kuyakuvumela ukuba uphephe intshukumo eyongezelelekileyo yokwanda okanye ukwenza ikhontrakthi ukuba iinkuni ziya kuyenza kwimeko entsha. Oku kunokuthatha iintsuku ezi-4 ukuya kwezi-14 ukuvumela iinkuni ziqhelane ngokupheleleyo.
Iingcebiso zokufakwa komgangatho okhuni we-DIY: Xa uqala iprojekthi ye-DIY yomthi okhuni okomthi kukho iingcebiso ezimbalwa kunye namaqhinga aya kugcina inkqubo ihamba kakuhle. Xa u-odola izinto zale projekthi, qiniseka ukuba uya-odola malunga ne-10% ngaphezulu, oku kwenzelwa xa iziqwenga zifuna ukusikwa kwaye kuya kubakho izinto ezilahliweyo. Sebenzisa iteyiphu yokupeyinta xa usika ukunqanda naziphi na iitshipsi okanye iidenti kumgangatho. Ukusebenza ukusuka ekhohlo ukuya ekunene kuyacetyiswa.
Soloko ulandela imiyalelo kunye neengcebiso zomenzi kwaye ujonge yonke imiyalelo yewaranti ngaphambi kokuba uqale nantoni na. Nantoni na oyenzayo, ungayi kutshitshisa i-hardwood flooring ngokuthe ngqo, sebenzisa iibhloko xa uthabathe umthi onzima endaweni. Xa usika iziqwenga zomthi onzima qinisekisa ukusebenzisa i-carbide blade blade. Ukubeka i-flooring yakho ngokubhekiselele kwi-joist kuya kunika umgangatho oqinileyo wokulwa nokuqhekeka kweziqwenga kunye neziqwenga zomthi ezahlula.
Ukugcinwa kwemigangatho yakho emitsha yomthi okomeleleyo akuoyikisi kakhulu umsebenzi. Umgangatho wokhuni uya kuhlala ixesha elide ukuba awuphathwa gadalala. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ezinokubangela ingxaki kumgangatho wokhuni olomeleleyo ayikuko ukucoca ukuchitheka kwangoko.
Amanzi abangela ukuba ukhuni oluqinileyo lubole, lusonge intshukumo kwaye luhambe, luphulukane nobukhazikhazi, kunye nezinye ezingaphantsi kwezinto ezinqwenelekayo. Eyona ndlela ilula yokuphepha oku kukucoca ukuchitheka okumanzi kwaye ungasebenzisi manzi ukukorobha imigangatho. Imitshayelo kunye ne vacuums ziya kwenza kakuhle ukucoca i-hardwood flooring.
Umgangatho wokhuni oluqinileyo awunakukhuselwa yimikrwelo, ke ukubeka abakhuseli abaziva ezantsi kwefanitshala kuya kunceda ukukhusela nokukhusela umonakalo. Ilanga linokuba yingozi kwezinye iindidi zomthi phantsi.
Ezinye iihacks ezilula ezingavumeli ukuba oku konakalise umgangatho ziimfama okanye amakhethini kwiindawo ezifumana ngaphezulu kwelanga ngqo kwilanga lomthi onzima. Ukulandela la manyathelo othintelo kuya kuyenza ke ulondolozo kuphela oluya kuyidinga kukucokiswa kwamaxesha ngamaxesha.
Guqula igama kwipaspoti emva komtshato
Uhlaziyo lwemitshato yeenwele ezinde
Sisiphi isangqa somtshato esinxibileyo
ukuvula uyilo lwegumbi lokuhlala
yintoni isandla somtshato